सरकारले कहाँबाट लिँदैछ पौने ४ खर्ब वैदेशिक सहायता ? – Sapana Sanjal
June 7, 2021 158
Sapana Sanjal : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेकोे छ ।
दाता ऋण अनुदानकूल एडीबी१,१३,४९,८१३,६१,४३१,१७,११,२४आइडीए (वर्ल्ड बैंक)८४,१९,४९३,७२,७७८७,९२,२६आइएमएफ२६,३३,०००२६,३३,००ओपेक१,०३,०६०१,०३,०६एसडीएफ१५,०००१५,००यूएन०२,००,४२२,००,४२आइफाड५,३०,४७१,८४,४९७,१४,९६एसएसडीपी५,८५,६५२,६९,८९८,५५,५४एआईआईबी१,८०,००४,००१,८४,००जीपीई०८६२६८६२६चीन९,६०,००८,१५,६९१७,७५,६९फिनल्याण्ड०४७८७४७८७जर्मनी०१०६५०१०६५०भारत१९७३४४१००७२९२९८०७३जापान१८३०४५१९७००२०२७४५कुवेत विकास कोष९७४२०९७४२नर्वे०४०००४०००स्वीट्रल्याण्ड०३०९१६३०९१६साउदी विकास कोष१९१५३०१९१५३बेलायत०८२८७८२८७अमेरिका०८४०८०८४०८०यूरोपेली युनियन१०६०००३५१८२१४११८२संयुक्त कोष१०,००,००१०५९१२२०५९१२कूल३०९२९३२६३३७६२३७२६६९४
Prevकाठमाडौंमा चिनियाँ खोप : कुन उमेर समूहलाई कहिले ?
Nextमेक्सिकोलाई हराउँदै अमेरिकाले जित्यो नेसन्स लिगको उपाधि